हामी धेरै जवाफ समय छैन, जो एक अज्ञात कलर देखि एक कल प्राप्त। त्यसपछि हामी यसलाई हुनेछ र कहाँ भनिन्छ जो एक conjecture, सताउन। अक्सर हामी पनि यो शहर पत्ता लगाउन फोन नम्बर द्वारा सम्भव छ कि छैन भनेर थाहा छैन। वास्तवमा, यस्तो जानकारी धेरै उपलब्ध छ, र यो बिल्कुल निःशुल्क छ।
तपाईं के चाहिन्छ?
एक सेल फोन नम्बर मा शहर थाहा गर्न, तपाईं इन्टरनेट पहुँच र फोन नै एक कम्प्यूटर आवश्यक हुनेछ। स्टार्टर्स लागि, तपाईं बस मोबाइल अपरेटरलाई र तिनीहरूलाई तपाईं चासो कि जानकारीको लागि अनुरोध गर्न सक्छ। निस्सन्देह, सेलुलर को प्रतिनिधिलाई कसलाई फोन नम्बर दर्ता गरिएको छ, तर जो देखि क्षेत्र कल गरिएको थियो, त्यो आवश्यक कल भन्छु छैन। कारण यो जानकारी लुकाउन, उहाँले कुनै पनि छैन।
मोबाइल संचार कसरी?
सारा देश केही कक्षहरू विभाजन गरिएको छ। तिनीहरूलाई मा repeaters को मद्दतले निरन्तर निरन्तर संचार सुनिश्चित। को ट्रांसमीटरों बीच दूरी मात्र पुनरावर्तक को वास्तविक स्थान मा निर्भर गर्दछ। तिनीहरूले एक निश्चित क्षमता छ, टी। ई मोबाइल फोन साथ चलाउन सक्ने संख्या। शहरी क्षेत्रमा, यो ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा धेरै उच्च छ। स्वाभाविक, सदस्य यात्रा छ, त्यसैले एक निश्चित तरिका मा नेटवर्क मनिटर र अर्को एक ट्रान्समिटर बाट स्विच। फोन समय समयमा, बन्द गरिएको छ भने उहाँले पनि यदि यो एक कल लागि प्रयोग गर्न छ, एक रिले एउटा संकेत पठाउँछ।
मोबाइल संचालक को सेवा
वास्तवमा, निर्धारण गर्न फोन नम्बर द्वारा शहर लगभग असम्भव छ। संचालक आफूलाई यस्तो सेवा प्रदान गर्नुहोस्। तिनीहरूले धेरै ठीक फोन फेला पार्न सिक्न मौका दिनुहुन्छ जो धेरै संवेदनशील साधन, छ। यो उद्देश्य लागि, निर्देशन खोजन विधि प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तै सेवा मोबाइल कम्पनीहरु आफूलाई प्रस्ताव गरिएको छ। तिनीहरूले तपाईंलाई मीटर को धेरै दसौं एक सेल फोन को स्थान निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ कि एक धेरै सूक्ष्मता रूपबाट साधन छ। यी उपकरणहरू तीन अलग अलग अंक देखि एक संकेत प्राप्त, स्थान गणना गर्न एक उत्कृष्ट मौका छ। अपरेटर तपाईंको कम्प्युटर मा परिहाल्छ। लामो डिजिटल संकेत - पुनरावर्तक मानक emits। यो एक मोबाइल फोन लिन्छ र यो एउटा सानो भाग पुनः emits। , मानक संग तुलना पुनरावर्तक संग प्राप्त भएको थियो जो संकेत, पछि, एक समय ढिलाइ निर्दिष्ट, र त्यसपछि तपाईँले फोन नम्बर मा शहर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
जानकारी को शुद्धता
सञ्चालन समयमा, प्रत्येक टेलिफोन समय समयमा यो आफ्नो स्थान निर्धारण गर्न को लागि अनुरोध पठाउँछ। अपरेटर जहाँ प्रयोगकर्ता केही मिनेट पहिले स्थित छ बारे जानकारी छ। फोन कल, अधिक सही जानकारी बढी सम्भावना आउन छ। फोन नम्बर के तपाईं पक्का लागि बाहिर शहर पाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले धेरै कारक ध्यान गर्नु पर्छ। सबै को पहिलो, यो रेडियो संकेत झल्काउने हस्तक्षेप छ। पनि महत्वपूर्ण भूमिका स्थान वर्णन खेल्छ। ध्यान साथै त्यहाँ बेस स्टेशन हो जहाँ, र सेल को आकार छ कि यो काम फोन को संख्या भुक्तान गर्नुपर्छ। सबै डाटा विश्लेषण गर्न कम्प्युटरमा प्राप्त भएपछि, यो मात्र होइन नम्बर सेल शहर, तर पनि विशिष्ट समयमा सदस्य को आन्दोलन थाहा गर्न सम्भव हुनेछ। यो जानकारी मोबाइल स्टेशन लागि आवश्यक सबै जसमा डाटाबेस, छ।
इन्टरनेट मार्फत जानकारी को लागि खोज
तपाईं भर्चुअल नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शहर पत्ता लगाउन फोन नम्बर द्वारा। यस को लागि यो खोज इन्जिन मा फोन कोड लोड गर्न आवश्यक छ। मूल कोड मात्र एक शहर, तर पनि क्षेत्र र राष्ट्र हो। यस सम्बन्धित स्रोतहरू मा एक विशेष पृष्ठभूमि अझ छ। कल कथित रूस मा प्रतिबद्ध भने, यो सिर्फ एक विशेष सञ्झ्यालमा कोड प्रविष्ट गर्न पर्याप्त छ, र पनि बाँकी क्षेत्रहरू भर्न आवश्यक छैन। प्रणाली तपाईँले प्रविष्टि संख्या को दायरा बारेमा सबै जानकारी प्रदर्शन गर्नेछ। तपाईं पनि एउटै स्रोतहरू मा लाइन "लामो-दूरी र अन्तर्राष्ट्रिय कोड" चयन र सदस्य को स्थान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। रूसी साइट जडान नवीनतम जानकारी छ। तर, यो पत्ता लगाएर, तपाईं खोज बक्समा लेख्न आवश्यक "रूसी सङ्ख्याछैन प्रणाली र योजना को रजिस्टर देखि निकाल्नुहोस्।"
ध्यान के तिर्नुपर्छ?
यो तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन्, क्षेत्र बारे जानकारी जसमा सदस्य दर्ता गरिएको छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। तर सदस्य को सही स्थान पत्ता लगाउन फोन नम्बर र शहर एक साधारण व्यक्ति हुन सक्दैन। यस्तो डाटा गोपनीय र मात्र उपलब्ध कानून प्रवर्तन अधिकारीहरु भएकाहरूलाई छन्।
त्यहाँ जानकारी प्राप्त गर्न वैकल्पिक छ। जो क्षेत्र र स्वतः शहर पहिचान गर्न सक्छन् मोबाइल फोन, को लागि एक विशेष कार्यक्रम विकास गरिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - आफ्नो फोन को लागि उनको चयन गर्ने अधिकार। रूस आफ्नै सदस्यहरू सुरक्षा चिन्ता गर्नुहुन्छ र व्यक्तिहरूलाई यो जानकारी प्रदान गर्दैन। यसो गर्न, तपाईं आफ्नो स्थान पहिचान गर्न फोन को मालिक को सहमति प्राप्त गर्नुपर्छ। तर, विदेशी देशहरूमा यस्तो स्थिति सिस्टम एक लामो समय को लागि प्रयोग गरिएको छ। 1996 मा मोबाइल फोन आए भन्ने कल को एक चौथाई, को '911' आपतकालीन सेवाहरूमा सम्बोधन गरिएको छ किनभने त्यो उनको विकास गर्यो। एकदम अक्सर मानिसहरू आतंक थिए र सही आफ्नो स्थान भनिन्छ हुन सकेन। यसलाई सही ठाउँमा जो देखि कल निर्धारण सक्छ मोबाइल संचालक को एक प्रणाली, व्यवस्थित निर्णय थियो किन कि छ। यो खतरा थिए जो मान्छे धेरै जीवन बचाउन मदत गरेको छ। कहिल्यै बिर्सन मोबाइल फोन छ कि - यो सेवा हामीलाई प्रदान गर्दछ त्यो केवल सुविधाजनक उपकरण, तर पनि हामीलाई बारेमा थप जानकारी थाहा अन्य मानिसहरूलाई वास्तविक मौका छैन। हामी एक सहायक किन्न गर्दा हामी आफूलाई जहाँ हामी कुनै पनि समय मा छन् बारेमा जानकारी छ कि बिकन एक प्रकारको संलग्न हुन्छन्। त्यसैले कहिल्यै यसको बारेमा भूल छैन।
महसुल "हरी" ( "Tele2"): वर्णन, अवस्था र विशेषताहरु
हेडसेट र वायरलेस समाधान - प्रसंग आज
कसरी भ्वाइस मेल टन अपरेटर गर्छ?
कसरी वजन बढाउन "स्टकलर: कलको पाइप्रेट"। समस्या समाधान गर्न सबै तरिकाहरू
बजार अर्थव्यवस्थाको मुख्य दिशाको रूपमा बैंकिंग प्रणाली
फोटो संग व्यञ्जनहरु: संग जौ सूप
ए टी Tvardovsky "म मेरो कुनै दोष थाहा ..."। कविता विश्लेषण: विचार र कलात्मक रूप उत्पादन
आफ्नो हातले प्लास्टिक बोतल को hedgehogs - यो धेरै सजिलो छ!
"Pradaksa" दबाइ। निर्देशन र वर्णन